Dibad baxyo iyo kacdoon cusub oo dib uga k qarxay gobolka Sitti(Sawiro) – Xeernews24
Dibad baxyo iyo kacdoon cusub oo dib uga k qarxay gobolka Sitti(Sawiro)
Dibad baxyo lagu diidan yahay fara galinta ay dawlada Itoobiya ee uu madaxa ka yahay mudane Dr:Abiye Ahmed galbedka Sitti ayaa maanta ka dhacday qaybo ka tirsan gobolka Sitti gaar ahaa degmada taarrikhda faca wayn leh ee Ayshaca.
Dhalin yaro ka gadoodsan afduubkii shalay loo geystay shacabka ku dhaqan magaalada Cadaytu ee galbeedka gobolka Sitti ayaa maanta curyaaniyey dhamaan isku socodkii gaadiidka kala duwaan ee uu kala goosha dalalka Jabuuti iyo Itoobiya,dhalintaan ayaa muujinaayey sidda uga soo horjeedaan sidda ay dawlada Itoobiya ugu tuman sharci iyo nidaamki dawliga ahaa ee dalka uyaal.
Sidda la waga og yahay waxaa jiray dhowr todobaad ka hor shir lagu qabtay magaalada Addi sababa oo u hoggaminaayey Dr Abiye Ahmed shirkaas waxaa lagu kulansiiyey madaxweynayaasha Soomaalida iyo Canfarta qodobadii shirka ka soo baxay waxay ahayd in la qabto shir ay labada maamuul(Soomaalida iyo Canfartu) yeelan doonaan si loo furdaamiyo.
Ariintaasi waxay noqotay biyo col dhaanshay ka dib markay is maamulka Canfartu ka soo qaadeen waxba kama jiraan oo ay ciidamo fedaraal ah xoog ku afduubeen shacabkii reer Cadaytu in ay ka mid yihiin dhulka Canfarta arrinta oo lidi ku ah rabinta shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Sitti.
Gadoodkan iyo jid goo,yadan ay dhigeen dhalinta iyo shacabka gobolka Sitti ayaa sii socon doona ilaa inta ay dawlada Itoobiya si xaq ah u eegeyso sharciga dalka.
Dr.Abye Ahmed oo dhawaan la guddoon siiyey abaal marinta nabada aduunka ayaa maanta u muuqan nin dalkiisa nabad waarta ka dhalin kara.
Ka sokow banaan baxyaddan Somaalida waxaa jira muddaharaado xooggan oo ay qowmiyadda Oromaddu ku diidan tahay Siyaasadda raysalwasaara Abye Ahmed qulqulatooyinkii maalmahaan socday waxay Dhimashada oo Kor Udhaaftay 78 Qof Iyo Dawlada oo Ka Hadashay.
Madaxa saxaafada xafiiska Raisul wasaaraha itoobiya Tilahun Neguse oo maanta saxaafada gudaha lahadlay ayaa sheegay in ilaa hada la,xaqiijiyay dhimashada 78 qof oo ku nafwaayay rabshado iyo iskudhacyo diimeed/qoomiyadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Oromiya.
Mr. Tilahun ayaa intaasi kudaray in ilaa hada xabsiga loo taxaabay dad gaadhaya 409 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka qaybqaateen isku dhacyada iyo dilalka fooshaxun ee dhawaan deegaanka Oromiya ka dhacay.
Mar wax laga waydiiyay sababta ay dawladu usamayn wayday kahortag kahor intayna dhibaatadu dhicin ayuu ku jawaabay inay jiraan kooxo aaminsan inay sharciga kasareeyaan iyo kuwo lidi ku ah isbadalka dalka balse xitaa Raisul wasaarahu uuna sharciga ka saraynin.
Dhankakale wuxuu sheegay inay dawladu siiwadayso sharci horkeenida dadka falkan lugta ku leh kadib marka baadhitaanadu dhamaadaan, wuxuuna intaasi raaciyay in talaabo laga qaadayo saraakiisha kaladuwan ee haayadaha amaanka ee aan shaqadooda kasoo bixin iyo falkan lugta ku lahaaba.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/muda.jpg 712 534 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-31 18:26:302019-10-31 18:26:30Dibad baxyo iyo kacdoon cusub oo dib uga k qarxay gobolka Sitti(Sawiro)
Cabdi Ilay Oo Maxkamada ku hor tawaawacay codsadayna in la Siidaayo. QORSHAHA CANFARTA EE CUSUB SIDEE KU HABOON IN LOOGA HOR TAGO ?